Soo dejisan Legacy 8.0.0.473 – Vessoft
Soo dejisan Legacy
Dhaxalka – software ah oo ururiya oo u maareeyaan geed qoyska. Software ayaa u saamaxaaya in ay abuuraan qaabab kala duwan ee jaantuska qoyska daraa in macluumaad ah oo ku saabsan awowayaashood la milicsiga ee dhacdooyinka iyo xaqiiqooyinka noloshooda kala duwan. Dhaxalka kuu ogolaanayaa inaad si ay u baadhaan macluumaadka ku saabsan taariikhda qoyska ay la yidhaahdo ama magac ee database dadweynaha kala duwan. Software ka kooban yahay editor ka dhisay-in badan oo ka mid ah qalabka si aad ugu qorshayso jaantus si fudud. Dhaxalka kaloo la shaqeeyaa images oo lagu soo bandhigi karo oo ah qaab show slide ama savers shaashad.
Waxay abuurtaa oo maamusha geed qoyska
Raadinta macluumaadka ku saabsan awowayaashood
Qalab badan oo ay u astaysto
Legacy Software la xiriira:
English, فارسی, Русский, Tiếng Việt... VueScan 9.5.58
العربية, English, Українська, Français... iSpy 6.5.8
العربية, English, Українська, Français... Bitcoin 0.13
English, Українська, Français, Español... Seaside Multi Skype Launcher 1.21
العربية, English, Українська, Français... Adobe Shockwave Player 12.2.5.195